Johannesburg, South Africa status on 28 Aug 2019 was .
Johannesburg, South Africa status on 27 Aug 2019 was .
Johannesburg, South Africa status on 26 Aug 2019 was .
Johannesburg, South Africa status on 25 Aug 2019 was .
Johannesburg, South Africa status on 24 Aug 2019 was .